चीनले किन गर्न खोज्दै छ मोबाइल प्रयोगकर्ताको फेस स्क्यान ? SULSULE:A Truly Nepali News Portal
चीनले किन गर्न खोज्दै छ मोबाइल प्रयोगकर्ताको फेस स्क्यान ?
बेइजिङ, मंसिर १६
चीनले देशका मोबाइल प्रयोगकर्ताको अनुहार स्क्यान गर्ने नियम लागू गरेको छ । नियमअनुसार नयाँ फोन प्रयोगकर्ताले फोन सेवाको आवेदन गर्दा आफ्नो परिचय प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । चीनमा लाखौँ इन्टरनेट उपभोक्ताले नयाँ नियम पालना गर्नुपर्ने भएको हो ।
उक्त नियम गत सेप्टेम्बरमा घोषणा गरिएकोमा आइतबारदेखि लागू भएको छ । चीन सरकारले साइबर स्पेसमा आफ्ना नागरिकको वैधानिक चाहना र अधिकारहरु रक्षा गर्न यस्तो नियम लागू गर्नुपरेको बताएको छ । त्यसो त चीनले यसअघि नै जनसंख्याको सर्वे गर्न अनुहार चिन्ने प्रविधि प्रयोग गरिसकेको छ । नयाँ नियमलाई लिएर तर्कवितर्क भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ ।
नयाँ नियमअनुसार नयाँ मोबाइल वा डाटा सम्झौता गर्दा उनीहरुले राष्ट्रिय परिचय पत्र देखाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै उनीहरुको तस्बिर पनि लिइने धेरैजसो देशमा लागू भएकै नियम हो । तर अहिले उनीहरुले आफ्नो अनुहार स्क्यान गरेर परिचय पत्रको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने नयाँ नियम लागू गरिएको हो ।
सन् २०१७ मा पनि इन्टरनेट प्लेटफर्महरुलाई उनीहरुका उपभोक्ताको सही पहिचान गर्नुपर्ने नियम लागू गरिएको थियो । सरकारले सबै इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई चिन्नको लागि नयाँ नियम लागू गरिएको बताइएको छ । यसबाट जनसंख्या पनि सर्वे गर्न सहज हुने बताइएको छ ।
सेप्टेम्बरमा यो नियम लागू हुँदा चिनियाँ मिडियाले खासै चासो दिएका थिएनन् । तर अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालमा भने धेरैको ध्यानाकर्षण भएको थियो । त्यस्तै पश्चिमा देशहरुले चीनले आफ्ना नागरिकमाथि आवश्यकताभन्दा बढी निगरानी गर्ने गरेको यसअघि नै आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
चीनले १७ करोड सीसीटीभी देशका विभिन्न स्थानमा राखेको र सन् २०२० सम्ममा ४० करोड थप्ने योजना बनाएको बताइन्छ । चीनले आफ्ना नागरिकसँग एएटै डाटाबेसबाट सार्वजनिक अन्तर्क्रिया गर्ने प्रणालीको विकास गर्न खोजेको पनि बताइने गरेको छ । अनुहार चिन्ने प्रविधिले देशको जनसंख्यामाथि निगरानी गर्न प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नेछ । (आर्थिक दैनिकबाट)
भारतमा आइतबारको तुलनामा सोमबार संक्रमितको संख्यामा केही कमी